Mashandisiro Ekushandisa Twitter | Martech Zone
Mashandisiro Ekushandisa Twitter
Chipiri, August 9, 2011 Chitatu, October 26, 2011 Douglas Karr
Usati washora iyi Infographic, nhasi chete ini ndashanda nemutengi uyo anonyatsoda zano mukushanda ne Twitter. Ini ndinofunga izvi infographic zvinopa ruzha mazano kune vanhu nemamwe matipi akakura pese pese. Kana iri bhizinesi kune bhizinesi (B2B) zano, ini ndinokurudzira maviri akasiyana matipi evatengi vangu:
Kutanga, ini ndinokurudzira ivo vatevere iyo vatungamiriri pa Twitter muindasitiri yavo, tanga kutaurirana navo, kusimudzira ma tweets avo kana mukana ukamuka, uye kuvaka hukama navo pamhepo. Vashoma vanhu vanogona kungojoina Twitter uye kuwana vateveri vakaringana kuti vabatsirwe nekukurumidza nekuishandisa. Kune vamwe vedu, isu tinofanirwa kubvumidzwa nevezera redu uye nekuziviswa kune edu ma network. Ndiine vangangoita vateveri ve29k, ndosaka ndichiedza kutarisisa kusimudzira vamwe! Mumwe munhu akazviita apo ini ndaingova nevashoma!
Chechipiri, ndinokurudzira kuti ivo tevera tarisiro yavo. Sezvo iwe uchikura chako chekutarisira base pa Twitter, pachave paine uye nekuwedzera mikana yekudyidzana navo. Iwe hauzomboziva kana tarisiro iri kuzoda rubatsiro rwako paTwitter… kuvapo pavanokumbira!
Kutenda kune vanhu vari pa Twiend yeiyo yakakura infographic!
Gadzira Zvinangwa Pamberi peApp App